Barnaamijka Farxad gelinta Dugsiga Sare ee Minnetonka
Barnaamijka MHS Varsity Cheerleading (Tonka Cheer)
Barnaamijka Tartanka Farxadda Weyn ee Dugsiga Sare ee Minnetonka (Tonka Cheer) waa koox ka kooban 20 xubnood oo dhiirrigeliya oo ka qaybqaata dhiirrigelinta dhinaca iyo tartanka inta lagu jiro xilli-ciyaareedkiisa 10-bilood (Maajo-Febraayo). Barnaamijka Tonka Cheer-ka waxaa lagu soo koobay dhaqan hodan ah oo guul leh. Xubnaha ka tirsan kooxdeeda waxaa ka go'an inay ka soo qayb galaan tababbarka, ciyaaraha, munaasabadaha adeegga bulshada iyo tartamada.
Xubnaha kooxda Tonka Cheer varsity waxaa lagu xushay hanaan tijaabin oo dhacaya dhamaadka bisha Abriil. Macluumaadka ku saabsan tijaabinta xilli-ciyaareedka soo socda ayaa lagu soo dhejin doonaa halkan iyo warbaahinta bulshada marka taariikhaha la aasaaso.
dhagsii si aad u aragto Xirmooyinka 'Tryout Packet'
Diiwaangelinta / ajuurada
Lacagta barnaamijka sanadlaha ah ee $ 225 oo lagu daray $ 75 MHS Waxqabadyada Hal mar ah (haddii aan hore loo bixin) iyo khidmadaha dheeraadka ah ee xeryaha, dharka farxadda, tartamada, la-taliyayaasha, safarka iyo Naadiga Booster ee MHS. MHS Cheerleading Booster Club waxay maal galisaa lacag ururiyayaasha si ay uyareeyaan qaar kamid ah kharashaadka kaqeybgalka barnaamijka farxadda.
Deeqaha waxbarasho ayaa la heli karaa markii la codsado. Fadlan la xiriir MHS AD, Ted Schultz wixii macluumaad dheeraad ah.
Tonka Cheer wuxuu ka kooban yahay laba xilli oo isku xiga: sideline (dhicitaan) iyo tartan (jiilaal). Barnaamijku wuxuu soconayaa laga bilaabo Maajo illaa iyo bartamaha Febraayo. Kooxda ayaa ku celcelisa seddex jeer usbuucii inta lagu jiro xilli ciyaareedka oo dhan.
Sideline cheerleading (dhicitaan) waxay ku lug leedahay ku faraxsanaanta cayaaraha kubbadda cagta ee 'Skippers varsity varsity', oo lagu qabto fest pep iyo waxqabadyada imanaya guriga. Sideline cheerleading waa waxqabad diiwaangashan oo ka socda Gobolka Minnesota ee Dugsiga Sare (MSHSL) kaas oo u adeega sidii loo xoojin lahaa niyada dugsiga, kor loogu qaadi lahaa isboorti wanaagsan loona horumarin lahaa ka qeybgalka dadka wanaagsan.
Farxadda tartanka (xilliga qaboobaha) waxay ku lug leedahay matalaadda MHS ee tartamada maxalliga ah, gobolka iyo qarankaba. Kooxda ayaa dhaqan ahaan u safreysa xerooyinka gobolka ka baxsan iyo gobolka ka baxsan iyo tartamada, oo ay ka mid yihiin Kaamarada UCA Cheerleading Camp ee ku taal Pennsylvania bishii Ogosto iyo Tartanka Ciyaaraha Cheerleading ee Dugsiga Sare ee UCA ee Orlando, Florida bishii Febraayo.
Tonka Cheer varsity cheerleaders waa in lagu qoraa darajooyinka 8-12 deyrta oo la buuxiyo Shuruudaha U qalmida ee MSHSL iyo Dugsiga Degmada Minnetonka. Eeg https://www.mshsl.org/sites/default/files/2020-07/handbook_2020-21_100bylaws_web.pdf
Dhacdooyinka lacag aruurinta
Tonka Cheer wuxuu leeyahay dhowr lacag uruursi sanadka oo dhan si looga caawiyo dib udajinta kharashyada laxiriira safarka, labiska, iwm. Raac Tonka Cheer ee Instagram iyo / ama Twitter fursadaha soo socda ee lagu taageerayo barnaamijka.
Lacag ururiyayaasha socda:
Tasteocracy , oo ah shirkad tijaabisa macaamiisha oo fadhigeedu yahay aaggeenna. Waa wax fudud, waxtar leh oo xiiso leh. Dadka qaangaarka ah iyo carruurta kaqeybgalaya waxay dooran karaan ($ 10) lacagta kaqeybgalka ama DHAMMAAN lacagaha kaqeybgalka ee Tonka Cheer. Eeg warqad ama booqo www.tasteocracy.com oo guji "JOIN" oo buuxi foomka saxiixa.
Dhoolacadeynta Amazon - si fudud u riix oo calaamadi xiriirkan markasta oo aad wax ka adeegato Amazon.com. Saxeexu waa fududahay! Faahfaahin ka aqri https://smile.amazon.com/gp/chpf/about/ref=smi_se_rspo_laas_aas .
2020 iyo 2019 Tartanka Horyaallada Farxada Leh ee Gobolka Minnesota
24-jeer Horyaallada Farxad-jeexista Gobolka Minnesota
Laga soo bilaabo 2011 Tonka Cheer wuxuu si isdaba joog ah ugu meeleeyay shanta ugu sareysa Tartanka Tartanka Gawaarida Dugsiga Sare ee UCA ee Orlando
UCA National Champions in 2020 (Jadwalka caadiga ah), 2017 (labadaba Ciyaarta Maalinta iyo Jadwalka Dhaqanka), 2013 (Jadwalka caadiga ah), iyo 2012 (Jadwalka caadiga ah).
UCA World Cheer Champions Champions League Qeybta Jadwalka Dhaqanka labadaba 2020 iyo 2016.
jadwalka Master diiwaangelinta Kooxda Site
Kooxda farxadda ee 'Tonka Sparklers team' waa barnaamij la-qabsi ah oo la soo saaray dayrtii 2011-ka waxaana kafaala qaadaya barnaamijka farxadda ee MHS varsity. Waxay ku faraxsan yihiin garabkeenna dhiirrigelinta badan ee cayaaraha kubbadda cagta ee Skippers waxayna ka qaybgalaan tartamada maxalliga ah iyo gobolka ee farxadda leh. Barnaamijka 'Sparklers' wuxuu socdaa Ogosto illaa Janaayo. Tababbarku waa hal mar usbuucii.
Xubnaha Tark Sparklers waa inay kaqeyb galaan fasalada 7 - 12 deyrta oo ay buuxiyaan shuruudaha u qalmida ee MSHSL iyo Minnetonka School District. Eeg https://www.mshsl.org/sites/default/files/2020-07/handbook_2020-21_100bylaws_web.pdf
$ 25 lacagta barnaamijka, khidmadaha labiska (way kaladuwan yihiin), oo lagu daray khidmadda hal mar oo ah $ 75 MHS haddii aan hore loo bixin.
Deeqaha waxbarasho ayaa la heli karaa markii la codsado . Fadlan la xiriir MHS AD, Ted Schultz wixii macluumaad dheeraad ah.
Barnaamijyada Farriinta Dugsiyada Hoose iyo Dhexe (MCES)
Ilmahaaga da'da dugsiga hoose ama dhexe ma muujiyey xiisaha uu u qabo dhiirrigelinta? MCES waxay bixisaa barnaamijyo farxadeed madadaalo oo loogu talagalay fasalada K-5 iyo 6-9. Labada horyaalba waxay diiradda saaraan horumarka iyo baashaalka. Labadaba waxaa lagu bixiyaa Minnetonka Community Education (MCES) . Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan midkood wac 952-401-6800.
dhagsii si aad u gasho
Waxaa lagu weydiin doonaa inaad gasho erey sir ah. Haddii aadan haysan lambarka sirta ah , fadlan la xiriir tababarahaaga.
Tababaraha madaxa ee Sparklers:
Naadiga MHS Cheer Booster wuxuu ka caawiyaa kor u qaadista iyo taageerida Barnaamijka Farxada leh ee MHS.
Naadiga Dhiirrigelinta Naxariista MHS